Isahluko 87 | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Noma yini engiyikhulumayo iyenzeka, akunjalo? Kodwa nisahlala ningangethembi, ningabaza amazwi Ami, futhi nicabanga ukuthi ngincokola Nani. Lokhu kuyahlekisa ngempela. NginguNkulunkulu uqobo Lwakhe! Niyaqonda? NginguNkulunkulu uqobo Lwakhe! Uma ngingenakuhlakanipha futhi ngingenamandla, ngingenza noma ngisho ngokuthanda kwami nje? Kodwa namanje aningethembi. Ngigcizelele ngokuphindaphinda kini, futhi nginitshelile ngokuphindaphinda. Kungani iningi lenu lingakholwa? Kungani nisenokungabaza? Kungani nibambelela ngokungadedeli emiqondweni yenu? Ingabe ingakusindisa? Ngenza engikushoyo. Nginitshele izikhathi eziningi: Thathani amazwi Ami njengayiqiniso futhi ningangabazi. Ingabe seniwathathe ngokuwethemba amazwi Ami? Ngokwakho ngeke wenze lutho, kodwa awukwazi ukukholwa kwengikwenzayo. Kungathiwani ngomuntu onjalo? Uma ngingagwegwesi, kusengathi angizange nginidale, okusho ukuthi, awufanelekile kukho konke ukuba ngumenzi womsebenzi Wami. Wonke umuntu kufanele akholwe ngamazwi Ami! Bonke kufanele bedlule esivivinyweni—ngeke ngivumele muntu aphunyuke edlule. Ngempela, lokhu akufaki labo abakholwayo. Abantu abakholwa ngamazwi Ami nakanjani bayokwamukela isibusiso Sami, esiyonikezwa wena ngokuhambisana nalokho okukholwayo, futhi kuyogcwaliswa kuwe. Madodana Ami angamazibulo! Manje, ngiqala ukuninika zonke izibusiso Zami. Nizoqala ukulahla zonke izibopho zenyama ezenyanyekayo kancane kancane: umshado, umndeni, ukudla, ukugqoka, ukulala, zonke izinhlekelele zemvelo (umoya, ilanga, imvula, iziphepho ezilumayo, usizi lokukhithika kweqhwa nazo zonke ezinye izinto enizizondayo). Niyohamba olwandle, ezweni, nasemoyeni ngaphandle kokuvinjwa yindawo, isikhathi, noma ukwakheka komhlaba, nithokoza ngezinhliziyo ekusingatheni Kwami okunothando, niphethe konke ngaphansi kokunakekela Kwami okunothando.
Ngubani ongaziqhenyi ngamadodana angamazibulo engiwaphelelisile? Ngubani ongeke adumise igama Lami ngenxa yamadodana Ami angamazibulo? Kungani manje ngifuna ukunikhombisa izimfihlakalo eziningi kangaka? Kungani kungabanga sesikhathini esedlule, kodwa namuhla? Lokhu ngokwakho nakho kuyimfihlakalo, uyazi? Kungani ngingashongo esikhathini esedlule ukuthi iChina iyisizwe engisiqalekisile? Kungani ngingabambulanga labo abangenzela umsebenzi? Namuhla nginitshela lokhu futhi: Namuhla, ngokombono Wami, konke kufeziwe—ngikusho lokhu ngikuqondise kumadodana Ami angamazibulo. (Ngoba namuhla amadodana Ami angamazibulo abuse kanye Nami, hhayi kuphela ethatha isimo, kodwa ngokubusa ngempela kanye Nami. Manje yilowo okusebenza kuye uMoya oNgcwele kuphela obusa ngempela Nami, futhi lokhu kwambulwa manje, hhayi izolo, noma kusasa.) Namuhla ngambula zonke izimfihlakalo Zami ebuntwini obejwayelekile ngoba labo bantu engifuna ukubambula bambuliwe, futhi lokhu kungukuhlakanipha Kwami. Umsebenzi wami usuqhubekele kulesi sinyathelo: Okungukuthi, kuleli qophelo kufanele ngenze uhlelo lwezinqumo zokuphatha engizinqumele leli qophelo. Ngakho, ngibeka nje uphawu olufanele phezu kwamadodana Ami angamazibulo, amadodana Ami, abantu, nabenzi bomsebenzi, ngoba nginegunya futhi ngiyokwahlulela futhi ngiyobusa ngenduku yensimbi. Ngubani olokotha ukungangenzeli umsebenzi ngokulalela? Ngubani olokotha akhononde Kini? Ngubani olokotha ukuthi angiyena uNkulunkulu wokulunga? Ngiyazi, imvelo yenu yobudeveli kade yambulwa phambi Kwami: Kulowo engimenzela ukulunga, ninomona futhi niyamzonda. Lokhu kuyimvelo kaSathane ngokuphelele! Ngilungile emadodaneni Ami—uyalokotha uthi angilungile? Ngingakuxosha ngokuphelele. Ngenhlanhla ungenzela umsebenzi futhi manje akusona isikhathi; kungenjalo, bengiyokuxosha!
Ingqikithi KaKristu Ukuthobela Intando KaBaba Osezulwini Isandulela Isahluko 6 Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe I